ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
2 သိန်း မှ3သိန်း ထိ ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ
ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17979699 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
35ရပျကှကျ ပငျလုံကြောကပျလမျး ပထမထပျ တိုကျခနျးငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17952119 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
37ရပျကှကျ ပငျလုံလမျးမအနီး လုံးခငျြးအိမျ ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17945883 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မွောကျဒဂုံ ဘုရငျ့နောငျလမျး တိုကျခနျးငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17924908 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17890292 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏မ/ဒဂုံ ၃၂.ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမ City mart တို့အနီး အလွှာနိမ့်ပေကျယ်ငှားပါမည်...🙏🙏🙏
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17834067 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09-763 810 191 / 09-445 823 005,09-699860804
35W ပငျလုံလမျးကြောကပျလမျး ပထမထပျ ငှားမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17798761 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
30W စဈတောငျးလမျး အနီးလုံးခငျြးအိမျအသဈ ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17798618 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Capital အနီး 33W ပထမထပျငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17798531 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပငျလုံလမျးမဒဲ့ဆငျး 34W ဆိုငျခနျး ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-17793064 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်